I-Charlotte Shack, iPacific Palms / iBlueys Beach
Indawo ekhethekileyo yangoku yasimahla eyilwe ngokuyilwe kwaye ibhaso lokuhlala eliphumeleleyo kwindawo ezi-5 zeehektare zabucala kuphela imizuzu ukusuka elunxwemeni. Ngamagumbi amabini okulala, amagumbi amabini okuhlambela anendawo eyaneleyo yangaphandle ejonge i-bushland entle inika indawo yokuzola yamagcisa / ababhali okanye iholide yonxweme ekhethekileyo. Kukho idama kwipropathi kunye neeleli ezizinzileyo eziya kwiindawo eziphezulu ngaphakathi zenza ukuba zingabafanelanga abantwana abancinci.
Ngenxa yeemeko zangoku sicela zonke iindwendwe ukuba zigonywe ngokupheleleyo kwi-COVID ngaphambi kokuba zifike.
Idizayinwe kwaye iphethwe ngabakhi bezakhiwo basekhaya, le ndlu ibonelela ngamava okwenene awodwa ekubalekeni kwakho elunxwemeni. Yakhiwe ngamaplanga asekuhlaleni, izitena ezisetyenzisiweyo, imiqondiso esetyenzisiweyo kunye ne-Colorbond ijikeleza ngaphezu komhlaba ngokujonga ngasese kwi-canopy yomthi. Amandla elanga, iitanki zamanzi kunye noyilo lwesolar engasebenziyo zongeza iziqinisekiso ze-eco zepropathi.
Iindwendwe zifika ngendlela ejikajikayo edlula idama (kwaye ngokufuthi i-wallabies yabahlali) ukuya kwikhapoti enkulu enye enendawo eyongezelelweyo yeebhayisekile, iibhodi kunye nezinye izixhobo. Indlela yokuhamba ke ikhokelela kwirack yebhodi yokusefa kunye neshawari yangaphandle ukuya kwindawo enkulu egqunyiweyo yokonwabisa. Idesika inebar yesidlo sakusasa, itafile yokutyela kunye nezitulo, i-BBQ kunye neendawo zokuhlala eziqhelekileyo. Oku kunokuvalelwa emazantsi ngephaneli enkulu yesilayidi ukuba kuyafuneka.
Indlu ngokwayo inokungena kwiphedi yezitshixo, ke akufuneki ukhumbule izitshixo xa usiya elunxwemeni, kwaye umntla omkhulu ujonge iifestile eziphindwe kabini ezijonge etyholweni. Kukho ikhitshi langoku elinendawo yokupheka yokungenisa, iibhentshi zamatye, imicrowave kunye neoveni encinci. Zonke izixhobo zokupheka ezisisiseko kunye neziseko zasekhitshini nazo zinikezelwe. Indawo yokuhlala isicwangciso esivulekileyo ibonisa itafile ebanzi yeSydney Blue Gum slab enezitulo zebar, umlilo ocothayo weenkuni kunye nendawo yokuhlala. Kukho i-wifi ekhoyo kwisiza kunye ne-USB eyaneleyo kunye noqhagamshelo lwamandla, nangona kunjalo akukho TV. Igumbi lokulala eliphambili linebhedi enkulukazi, indawo yokuxhoma kunye nedesika. Umgangatho ongasempuma ufikelele kweli gumbi yindawo entle yokuhlala kwaye ube nekhabhathi yasekuseni elangeni. Kukho indawo encinci yokuphola ngaphezulu kwegumbi lokulala elifikelelekayo ngeleli esisigxina. Igumbi lokulala lesibini linebhedi enye ezantsi kunye nebhedi enye kwigumbi eliphezulu lokulala elifikelelekayo ngeleli. Kukho ne-hammock enkulu phakathi kwe-loft yokulala kunye nesilingi kweli gumbi. Abantwana bayayithanda le ndawo ye-hangout! Igumbi lokuhlambela eliphambili elihlala phakathi kwamagumbi amabini okulala lineWC, ishawa kunye nesitya sokuhlambela.
Ipropathi ikwanendawo yokuhlamba impahla, iyadi encinci ebiyelwe ngasemva kunye nendlu yamaplanga e-rustic enombono wehlathi!
QAPHELA: 'Ityotyombe' lilungele usapho oluncinci okanye isibini. Ubume bamagumbi kunye neebhedi zinokungafanelanga iindwendwe ezi-4 zabantu abadala. Ukuba iindwendwe ezi-4 zabantu abadala zicela ukuhlala apho kunokubakho intlawulo eyongezelelweyo ebandakanyiweyo.
Ibhlokhi entle yasehlathini enentaka ezininzi, ii-wallabies kunye nezinye izilwanyana zasendle. Kuphela 5-10 imizuzu ukusuka Cellito beach, Sandbar, Blueys beach, Boomerang beach, Elizabeth beach, Wallis lake, Smiths Lake, Wallingat national park and Booti Booti national park.
Abanini bahlala kufutshane kwaye badla ngokufumaneka kwiindwendwe ukuba ziyafuneka ngexesha lokuhlala kwazo. Ukuba ngenxa yesizathu esithile abanini abafumaneki kukho umphathi wepropathi onokuthi aphendule nayiphi na imibuzo kwaye anike uncedo ngokungabikho kwabo.
Abanini bahlala kufutshane kwaye badla ngokufumaneka kwiindwendwe ukuba ziyafuneka ngexesha lokuhlala kwazo. Ukuba ngenxa yesizathu esithile abanini abafumaneki kukho umphathi wepr…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-5027-2